Fahasahiranana Ara-bola No Nahatonga Ny An-tanàna Kely Iray Ao Makedonia Ho Lasa Mpomba an’i Trump · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2016 8:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, Français, عربي, English
Namoaka ny tantara ny tranonkala Amerikana Washington Examiner tamin'ny Avrily lasa teo. Nampiseho ny tatitra fa mampiseho anarana sy adiresy ary ny fomba ifandraisana amin'ny tompony monina ao Makedonia ny fandraketan'ny ICANN WHOIS ny tranonkala -izay mampiasa sehatra anarana manintona avokoa izy rehetra- toy ny Usanewsflash.com, 365usanews.com, worldnewspolitics.com . Nanazava ny Washington Examiner fa “natao hampirona ireo mpifidy tsy mbola tapa-kevitra ho amin'ny kandidà ho filoham-pirenena Donald Trump” ireo tranonkala ireo.
Tamin'ny voalohany ny resaka an-tserasera momba ity tatitra ity dia nihodikodina tamin'ny mety ho fifandraisana misy eo amin'ny antokon'ny mpitondra elatra havanana ao an-toerana sy ny mpandala ny mahazatra ao Etazonia. Nanana fifandraisana izy ireo teo aloha.
Na izany aza, nanambara zavatra hafa tanteraka ny fanadihadiana nataon'ny tranonkalam-baovao tsy mitady tombombarotra Meta.mk. Nifandray tamin'ireo olona voalaza fa tompon'ny seha-baovao mpomba an'i Trump ny mpanao gazety Meta.mk. Niantsafa tamin'izy ireo ny tompon'ny tranonkala roa. Mpianatra siansan'ny solosaina ny tompon'ny tranonkala iray, ary mpampianatra teny Anglisy ny iray. Nanazava izy ireo fa manohana an'i Trump mba hahazoana vola avy amin'ny alàlan'ny ‘tendry’ atao amin'ny dokambarotra an-tserasera miraikitra ao amin'ny tranonkalan-dry zareo.
Nanazava ireo mpisera media sosialy Makedoniana hafa fa misy ny orinasa madinika mifototra amin'ny famoronana tranonkala miompana amin'ny lohahevitra mahaliana ireo mpijery Amerikana. Misy mihitsy aza ny fianarana “Raharaham-barotra an-tserasera sy ny Fanofanana Haivarotra” ka afaka mianatra hananganana tranonkala WordPress ny olona mahay manoratra teny anglisy ary avy eo hamoaka “vaovao” miompana amin'ny lohahevitra isan-karazany. Afaka manome fidiram-bola ireo dokambarotra araikitra aminy, kanefa toa ireo olona manome fampianarana no mahazo tombontsoa lehibe indrindra amin'ity indostria ity. Manao dokambarotra ao amin'ny media sosialy izy ireo ary toa efa vonona sahady ny mpianatra vaovao.